एसियाको पावर हाउस जापानले विश्वकपमा देखाएको खेल र कीर्तिमान
२०७५ असार ६ बुधबार, काठमाडौं । रुसमा भइरहेको विश्वकप फुटबलमा जापानले शानदार सुरुआत मात्र गरेको छैन व्यक्तिगत रुपले कीर्तिमान पनि बनाएको छ । ... बाँकी अंश»
विश्वकप २०१८ का लागि शिवम् सिमेन्टले ल्यायो 'प्रेडिक्ट एण्ड विन' अफर
२०७५ असार ६ बुधबार, काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टले फिफा विश्वकप २०१८ को अवसरमा आफ्ना फेसबुक फलोअर्सलाई आफ्नो योजना अन्तर्गत वल्र्डकप विजेताको भविष्यबाणी गरी आकर्षक पुरस्कार जित्ने अवसर प्रदान गर्ने भएको छ । ... बाँकी अंश»
विश्वकप फुटबलमा बुधबार तीन खेल, यस्तो छ तालिका
२०७५ असार ६ बुधबार, काठमाडौं । रुस विश्वकप फुटबलमा बुधबार तीन खेल हुँदैछन् । पहिलो खेलमा समुह बी को खेलमा पोर्चुगल र मोरक्को भिड्दै छन् । ... बाँकी अंश»
आयोजक रसियाको उच्चस्तरीय प्रदर्शन जारि, ईजिप्ट पराजित
२०७५ असार ६ बुधबार, काठमाडौं। आयोजक रसियाले मो. सलाहको ईजिप्टलाइ ३-१ गोलले पराजित गर्दै आफ्नो दोस्रो खेल जितेको छ। यो जितसँगै रसियाले २ खेलमा ६ अंक प्राप्त गर्दै सुखद विश्वकप यात्रा जारि राखेको छ। ... बाँकी अंश»
पोल्याण्ड बिरुद्ध सेनेगल बिजयी
२०७५ असार ५ मंगलबार, काठमाडौं। अफ्रिकन पावर हाउस सेनेगलले युरोपको राम्रो मानिएको टोली पोल्याण्डलाई २-१ गोलले पराजित गर्दै विश्वकप फुटबलमा सुखद सुरुवात गरेको छ। ... बाँकी अंश»
विश्वकप : जापानले एसियाको ईज्जत जोगायो, कोलम्बिया हार्‍यो
२०७५ असार ५ मंगलबार, काठमाडौं । रुसमा जारी विश्वकप फुटबलमा जापानले एसियाको इज्जत जोगाएको छ । समूह एच अन्तर्गत भएको खेलमा जापानले कोलम्बियालाई २–१ ले हराउँदै एसियाको इज्जत जोगाएको हो । ... बाँकी अंश»
ब्राजिलका नेयमारले विश्वकपको आगामी खेल गुमाउने आशंका
२०७५ असार ५ मंगलबार, काठमाडौं । ब्राजिलियन स्टार नेयमारले रुस विश्वकपको बाँकी खेल गुमाउनसक्ने भएका छन् । विश्वकपको पहिलो खेलको क्रममा भएका फाउलहरुले नेयमार ब्राजिलको आगामी खेलमा अनुपस्थित हुनसक्ने आशंका बढेको हो । ... बाँकी अंश»
जित्नै पर्ने दबाबमा इजिप्ट, रसिया हराउन मैदानमा उत्रिँदै सलाह
२०७५ असार ५ मंगलबार, काठमाडौं । विश्वकप पहिलो खेलमा उरुग्वेसँग १–० ले हारेको टोली इजिप्टले आफ्नो दोस्रो खेलमा मंगलबार आयोजक रुसको सामना गर्दैछ । ... बाँकी अंश»
पोल्याण्ड र सेनेगल एकअर्कालाई ‘जिल्याउन’ खोज्दै, यस्तो छ इतिहास
२०७५ असार ५ मंगलबार, काठमाडौं । मंगलबार पोल्याण्ड र सेनेगलको बीचमा समुहको पहिलो चरणको अन्तिम खेल हुँदैन । समुह एचमा रहेका यी दुई टोलीहरुको बीचमा नेपाली समयअनुसार राति पौने नौ बजे खेल हुन गइरहेको हो । ... बाँकी अंश»
एसियाको ‘पावर हाउस’ जापान के गर्ला विश्वकपमा कोलम्बियासंग
२०७५ असार ५ मंगलबार, काठमाडौं । विश्पकप फुटबलमा मंगलबारको पहिलो खेलमा जापान र कोलम्बियाको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । एचको पहिलो खेलमा मंगलबार नेपाली समयअनुसार साँझ पौने छ बजे उनीहरुको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यो दुवै टोलीका लागि यो खेल महत्वपूर्ण रहनेछ । ... बाँकी अंश»
विश्वकप फुटबलमा मंगलबार तीन खेल, यस्तो छ तालिका
२०७५ असार ५ मंगलबार, काठमाडौं । विश्पकप फुटबलमा मंगलबार तीन खेल हुँदैछन् । मंगलबार पहिलो चरणका सबै खेल सकिने छन् र दोस्रो चरणको खेलल पनि सुरु हुनेछ । ... बाँकी अंश»
जोसिलो टिमको खेल हेर्दा बेचैन बढी, यसकारण त्यस्तै गरायो इंगल्याण्डले
२०७५ असार ५ मंगलबार, काठमाडौं । रुस विश्वकप फुटबलमा ह्यारी केनले ट्युनेसिया विरुद्ध दुई गोल गर्दा अनौठो इतिहास बन्यो । उनले विश्वकपमा गरेको दुई गोल इंगल्याण्डका लागि २८ वर्षपछि पहिलो पटक भएको थियो । ... बाँकी अंश»
जहाँ ३५ फाउल भयो र आठ पहेंलो कार्ड देखाइयो
२०७५ असार ५ मंगलबार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको समुह जी को खेलमा दावेदार बेल्जियमले उत्कृष्ट सुरुआत गरेको छ । बेल्जियमले नवप्रवेशी टिम पानामालाई ३–० ले हरायो । ... बाँकी अंश»
यस्तो थियो स्वीडेन र दक्षिण कोरियाको खेल
२०७५ असार ५ मंगलबार, काठमाडौं । रुस विश्वकप फुटबलमा सोमबार भएका तीन वटै खेलमा जितहारको परिणाम आएको छ । स्वीडेनले दक्षिण कोरियालाई हरायो । समुह एफ को खेलमा स्वीडेन १–० ले विजयी भयो । ... बाँकी अंश»
एसियाली राष्ट्रका खेलाडीलाई विश्वकपमा ‘टर्चर’ !
२०७५ असार ५ मंगलबार, काठमाडौं । रुसमा विश्वकप फुटबलको २१ औं संस्करण चलिरहँदा एसियाली राष्ट्रका खेलाडीले ‘टर्चर’ महसुस गर्नुपरेको छ । खेलका क्रममा रेफ्रीले एसियाली टिमलाई हेर्ने नजर नै फरक गर्ने गरेको पाइएको छ । ... बाँकी अंश»
कप्तान केनको अन्तिम समयको गोलले ईङल्याण्ड बिजयी
२०७५ असार ५ मंगलबार, काठमाडौं। ईङ्लिश कप्तान ह्यारी केनको २ गोल मदतले ट्युनिसिया २-१ गोलले पराजित भएको छ। केनको ९१औं मिनेटको गोलले ईङल्याण्ड तीन अंक हासिल गर्न सफल भएको हो ... बाँकी अंश»
लुकाकुको दुई गोलले पनामा बिरुद्ध बेल्जियम बिजयी
२०७५ असार ४ सोमबार, काठमाडौं। रोमेलु लुकाकुको २ गोलले बेल्जियम पनामा बिरुद्ध ३-० गोलले बिजयी भएको छ। साविक बिजेता बेल्जियमलाई पहिलो हाफमा पनामाले राम्रो टक्कर दिएको थियो। ... बाँकी अंश»
दक्षिण कोरियाविरुद्ध स्वीडेन विजयी
२०७५ असार ४ सोमबार, काठमाडौं। विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको समूह ‘एफ’को खेलमा स्वीडेन विजयी भएको छ। स्वीडेनले दक्षिण कोरियालाई १-० गोलले पराजित गर्दै विजयी भएको हो। ... बाँकी अंश»
ट्युनिसिया र इंगल्याण्ड बीच रोमान्चक प्रतिस्पर्धा, दुवैलाई जित्नै पर्ने दबाब
२०७५ असार ४ सोमबार, काठमाडौं । समुह 'जी' को दोस्रो खेलमा सोमबार ट्युनिसिया र इंगल्याण्ड आमनेसामने हुँदैछन् । नेपाली समयअनुसार राति पौने १२ बजे उनीहरुको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको हो । ... बाँकी अंश»
बलियो बेल्जियमलाई रोक्ने तयारीमा पानामा
२०७५ असार ४ सोमबार, काठमाडौं । सोमबार बेलुका बेल्जियम र पानामा समुह जी को पहिलो खेलमा बेल्जियम र पानामा आमनेसाने हुँदैछन् । नेपाली समयअनुसार उनीहरुको बीचमा बुलुका पौने नौ बजे खेल हुनेछ । ... बाँकी अंश»